Milkiilaha Milan Mr Li & macallinkii hore ee Fatih Terim oo saaka booqday Milanello + Sawirro – Gool FM
(Milanello) 05 Maarso 2018 – Waxaa Sabtigii garoonka Malpenza kasoo degey milkiilaha AC Milan oo sida taageerayaal kaleba doonayay inuu fiidnimadii Axadda daawado kooxda Milan oo ciyaari lahayd kulankii Derby Milano, balse taasi ma dhicin kaddib geeridii lama filaanka ahayd ee kabtankii Viola.
Yeelkeede, saaka ayuu Yonghong Li oo ay wehlinayeen xubno ka tirsan qoyskiisa wuxuu ku kallahay xerada ay ku tababarato kooxda Milan ee Minalello, isagoo kooxda la dardaarmay kahor kulanka ay Khamiista la yeelan doonaan Arsenal, isla markaana la qadayn doona kooxda.
Mr Yonghong Li oo dhamaystay howlo kale oo heer maamul ah sida dib u bixinta qaamaha ay ku leedahay Elliot iyo la kulanka madaxda kooxda sida ninka garabka midig u ah ee Han Li, ayaa kaddib salaanta naadiga wuxuu berritoole dib ugu laaban doonaa dalkiisa Shiinaha.
Waxaa sidoo kale maanta xerada tababarka Milanello tegey macallinkii hore ee AC Milan ee Fatih Terim, kaaso si gaar ah ula kulmay macallinka Milan ee Gennaro Gattuso oo uu laftiisa macallin usoo noqday qaybtii hore ee fasal-ciyaareedkii 2001–02.
"Inta aan taabtay kubadda ayaa yareyd", - Hazard oo dhaliilay qaab ciyaareedkii Chelsea ee kulankii xalay